Manomboka izao dia hizara atiny Adobe ao amin'ny Microsoft Word | Famoronana an-tserasera
Raha mpampiasa Microsoft Word sy PowerPoint ianao (iza no tsy…), tokony ho fantatrao fa Adobe dia nanambara ny fampidirana ny Creative Cloud Library ao amin'ireto fampiharana roa natokana ho an'ny birao mandeha ho azy sy ny filàna hafa.
Doka iray manontolo ahafahan'ireo mpamorona mamorona mampiasa ity fitaovana Adobe ity hitsin-dàlana azy ao amin'ny Microsoft Word sy PowerPoint. Nahita zavatra mitovy amin'ny Dropbox sy ilay kisary mamela anay hizara ny atiny mivantana amin'ny iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra amin'ny rahona izahay.
Izao no fotoana ho an'ny rehetra an'ny orinasa na fikambanana dia afaka miditra haingana amin'ny atiny ilain'izy ireo amin'ny rakitra Word sy fampisehoana PowerPoint. Ny tanjona dia ny hampihenana ny ezaka ary hanatsara ny fizotran'asa amin'ny alàlan'ny famelana ny fiaraha-miasa eo amin'ny ekipa.
Adobe dia namoaka horonantsary mampiseho ny fomba fiasan'ity fampidirana ity eo anelanelan'ny Creative Cloud Library sy ireo fampiharana Microsoft roa ireo ho an'ny antontan-taratasin'ny birao sy ireo famelabelaran-kevitra izay tena ilaina amin'ny karazana orinasa, mpiasa tsy miankina, orinasa ary mpampiasa. Notanisainay ny fampidirana Dropbox mba hahafantaranao tsara ny fomba fiasan'izy io, fa kosa mamporisika anao izahay hijery ilay horonan-tsary maharitra 1 minitra sy 30 segondra monja izay iasanany tanteraka.
Fitaovana mitambatra izay ho mora ampiasaina ho an'ireo mila manaraka ny tsipika famolavolana na ny fitenin'ny marika manokana. Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miandry isika mandra-pahavitany azy. Amin'izay fotoana izay dia ho afaka hiditra amin'ilay fiasa hahafahanao mitondra ireo singa mamorona izay endrika amina Adobe, toy ny logo, app, ary atiny hafa amin'ireo antontan-taratasy Word na fampisehoana PowerPoint.
Una Adobe miara-miasa amin'i Microsoft hitondra anay tsy ho ela ny Adobe Fresco mahafinaritra anao, fampiharana sary hanaovana fifaninanana amin'ny ProCreate.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Adobe dia nanambara ny fampidirana mivantana ao amin'ny Microsoft Word sy PowerPoint